Faalo:- hadii dagaal lagu qaado Iiraan waxaa dambsa noqon doona Daaraha dhaadheer ee Imaaraatka. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Faallo qoraha sare ee wargeyska Washington Post, David Ignatius ayaa sheegay in daaraha dhaa-dheer ee Imaaraadka Carabta ay ku baabi’i doonaan dagaal kasta oo Iran lagu qaado.
Dubai iyo Abu Dhabi waxay noqon doonaan bartilmamaeedka koowaad ee dagaal kasta oo dhex-mara Iran iyo Mareykanka. Tani waxaa garowsaday hoggaamiyayaasha Imaaraadka Carabta oo dhowaan go’aansaday inay ka goostaan Sacuudiga, islamarkaana inta badan ciidamadooda kala baxaan dagaalka Yemen.
“Sabtidii tagtay Iran waxay Marinka Hormuz ku qabsatay Markab yar oo saliida qaada, hase yeeshee wax fal-celin ballaaran ah lagama sameyn. Halka Imaaraadka ay ka aamuseen, Mareykanka ayaa sidoo kale si kooban uga hadlay” ayuu ku yiri David Ignatius faalladii uu ku qoray Washington Post.
Imaaraada Carabta, ayuu ku yiri qoraalka, waxay ogyihiin in daaraha dhaadheer ee quruxda badan ay noqon doonaan bartilmaameedyada gantaallaha Iran, kuwaas oo bilicda Dubai iyo Abu Dhabi u rogi doonaan dambas.
Mas’uuliyiinta Imaaraadka Carabta ayaa hadda isku dayaya in la xakameeyo xiisadda Iran, taasi oo qeyb ka ah in ciidamadooda kala baxaan Yemen kadib dagaal burbur badan oo qaatay afar sano oo lala galay maleeshiyada Iran ay taageerto ee Xuutiyiinta.
Ka-bixitaanka ciidamada Imaaraadka Carabta ee Yemen ayaa sidoo kale tusmeyneysa in isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka uu burburayo, taasi oo macanheedu yahay in maskaxdii dagaalka Yemen oo ah dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salamn uu hadda kali ku yahay mashaqada Yemen.
Previous articleMa dhab baa in la musuqmaasuqay dhaqaale loogu tala galay garoonka kubadda Cagta ee Magaalada Garoowe?.
Next articleDAAWO:- Gaadhi Hub usoo siday Ceel afwayn oo lagu qabtay Togdheer + Cuqaal hanjabaad udiray xildhibaanka gaadhiga lahaa.